Remover | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
monkey test နဲ့ time service virus ရှင်းနည်းများ
1 - Money Test & Time Service Error Remove Tool ( Beta 1.0 )
အခုတလော Android OS သုံး ဖုန်းများမှာ Monkey Test & Time Service ဆိုတဲ့
malware နှစ်မျိူးရဲ့ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ဆိုးဝါးစွာ ခံနေကြ ရတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေ တွေကျရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်လည်း ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ Android ဖုန်းပာာ Wifi နဲ့ Data connection ကို off ထားပေမဲ့လဲ အလို အလျောက် ပြန်ပြန် ပွင့်လာတဲ့ error ကို ရင်ဆိုင် ရပါတယ်။
အဲဒီခါကျရင် Firmware ပြန်တင်နေကြ ရတာတွေ တော်တော်ကို ကြုံတွေ့နေရ ပါတယ်။ အခု ကျတော့် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Ko Aung Myint Oo (iFix Myanmar.com ) မှ ဒီ error ကို ဖြေရှင်းတဲ့ နေရာမှာ Firmware တင်စရာ မလိုပဲ ဖြေရှင်း နိုင်ရန် bat ဖိုင်လေး တစ်ခုကို Beta 1.0 version အနေနဲ့ ဖန်တီးပေး ထားလိုက် ပါတယ်။
ဒီ bat ဖိုင်လေးကို အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် သင့်ဖုန်းမှာ ROOT Access ရှိဖို့တော့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုပုံ ကတော့ လွယ်ကူပါတယ်။ normal mode ကနေပဲ bat ဖိုင်လေးကို ဖွင့်ပြီး enter ခေါက်ပေး လိုက်ရုံပါပဲ။
Root access တောင်းဆို လာခဲ့ရင် Allow ဆိုတာကို နှိပ်ပေး လိုက်ရုံပါပဲ။ ဒါဆိုရင် bat ဖိုင်လေး ကနေ အလုပ် လုပ်ပေး သွားပြီး ဖုန်းကို reboot ချပေး ပါလိမ့်မယ်။ ပါဝါပြန်တက် လာရင်တော့ ဖုန်းမှာ တက်နေတဲ့ Monkey Test & Time service ဆိုတဲ့ malware လေးနှစ်ခုကို ရှင်းလင်းပေး ထားတာ တွေ့ရ ပါမယ်။
Remark >>> အလုံးတိုင်းတော့ အဆင်မပြေနိုင်ပါ။ စမ်းသပ် အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြန်လည် မျှဝေပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Original link - http://www.myanmarmobileapp.com/2015/09/24/money-test-time-service-error-remove-tool-beta-1-0/
2 - monkey test နဲ့ time service virus ရှင်းနည်း
ရေးသားသူ – Soe Han Htun (Myanmar Mobile User Group)
One click solution တွေ ထွက်လာပေမယ့် ရာနှုန်းပြည့် မရှင်းနိုင်ကြသေးတာကို တွေ့ရလို့ manual ရှင်းလို့ ရအောင် ရည်ရွယ်ပြီး ရေးလိုက်တာပါ။
adb command အသုံးပြုတတ်သူဖြစ်ရပါမယ်၊
ဖုန်းမှာ root access ရှိရပါမယ်၊
Busybox သွင်းထားရပါမယ်။(busybox.apk ကို playstore မှာတင် လွယ်လင့်တကူ သွင်းယူနိုင်ပါတယ်။
ပထမဆုံးကတော့ ဖုန်းကို wifi နဲ့ internet ကို ပိတ်ထားပေးပါ။
ပြီးရင် အရင်ဆုံး ဖုန်းနဲ့ computer ချိတ်ဆက်ပါမယ်။
adb command သုံးဖို့ adb.exe ရှိတဲ့နေရာမှာ shift+Right-click သုံးပြီး open command window here နဲ့ cmd box ကို ခေါ်ပါ။
ပြီးရင် အောက်ပါ cmd များကို ရိုက်ပါမယ်။
(အဲ device သိဖို့တော့ လိုမယ်နော်။ အပေါ်က cmd တွေပြီးရင် # သင်္ကေတ လေးပေါ်ပါမယ်။ ဖုန်းမှာလည်း superuser request တောင်းပါလိမ့်မယ်။)
System က default အနေနဲ့က user ကို read-only permission ပဲ ပေးထားပါတယ်။ဒီတော့ လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရအောင် read and write permission ရအောင် mount ရပါမယ်။
လို့ ရိုက်ထည့်ပါ။ ပြီးရင် virus ရှိတဲ့နေရာတွေကို ကြည့်ပြီး နာမည်တွေ မှတ်ထားနိုင်ဖို့ ls command ကို သုံးရပါမယ်။
ls -al /system/app လို့ ရိုက်ထည့်ပါ။ ပေါ်လာသမျှထဲမှာ virus file နာမည်တွေကို မှတ်ထားဖို့ လိုပါမယ်။ virus ဟုတ် မဟုတ် အလွယ်ခွဲခြားဖို့ ကတော့ date နဲ့ ခွဲနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ permission နဂို system file တွေက rw-r-r ပါ။ virus တွေကတော့ rw-r-r မဟုတ်ကြပါဘူး။
နောက်ထပ် နေရာတွေ စစ်ရပါအုံးမယ်။
ls -al /system/xbin
ls -al /system/bin
အဲ့ဒီ xbin နဲ့ bin ထဲမှာတော့ virus file တွေဟာ နာမည် အရှေ့မှာ . လေးတွေနဲ့ ပါပါတယ်။ (ဥပမာ- .b, .si.si)
အိုခေ အရင်ဆုံး app ထဲကကောင်တွေကို ဖျက်ဖို့ busybox command သုံးပါမယ်။
busybox chattr -iaA /system/app/*
လို့ ရိုက်ထည့်ပါ။ virus file တွေက ဖျက်ချခွင့်မရှိအောင် attribute တွေပြောင်းထားပါတယ်။ဒီအတွက် အထက်ပါ cmd က attribute ပြန်ပြောင်းတာပါ။ chattr ဆိုတာက change attribute ပါ။ နောက်က (-) အနုတ်က attribute တွေ ပြန်ဖြုတ်ရင်သုံးရပါတယ်။ ထည့်ချင်ရင်တော့ + ပေါ့။ i က immutable လို့ခေါ်တဲ့ attribute ပါ။
a ကတော့ append mode only ဆိုတဲ့ attribute ပါ။ A ကတော့ Don’t track attime ဆိုတဲ့ attribute ပါပဲ။ အခုသုံးတဲ့ busybox cmd ဟာ /system/app ထဲမှာ ရှိသမျှ apk အားလုံးကို အထက်က attribute 3မျိုးဖြုတ်ချပေးတာပါပဲ။ ပြီးရင်တော့ စပြီး ဖျက်ချလို့ ရပါပြီ။အကုန်လုံးကိုတော့ လိုက်ရေးမပေးတော့ပါဘူး။ ဥပမာအနေနဲ့ cameraupdate.apk ကိုပဲ ဖျက်ပြပါမယ်။
လို့ရိုက်ထည့်ပါ။ rm က remove ပါ။ အဲ့ဒီ rm နဲ့ app ထဲက virus တွေကို တစ်ခုချင်း စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဖျက်ပါ။
ပြီးရင် bin နဲ့ xbin ထဲက . နဲ့စတဲ့ကောင်တွေကို ဖျက်ပါမယ်။ သူတို့ကိုတော့ app ထဲကလိုမျိုး အားလုံးကို ညွှန်းပြီး attribute ဖြုတ်ချလို့မရပါဘူး။ ထို့အတွက် တစ်ခုဖျက်ဖို့ cmd ၂ကြောင်းဂိုက်ပေးရပါမယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ xbin ထဲက .si.si ဆိုတာကို ဖျက်ပြပါမယ်။
busybox chattr -iaA /system/xbin/.si.si
အထက်ပါပုံစံအတိုင်း xbin နဲ့ bin ထဲမှာ . နဲ့စသမျှအားလုံး လိုက်ဖျက်ပါ။
ls -al /system/etc လို့ရိုက်ပါ။ အဲ့ထဲမှာ install-recovery.sh ဆိုတာ ပါခဲ့ရင် သူ့ကိုလည်း ဖျက်ပေးရပါမယ်။
အဆုံးသတ်အနေနဲ့ app ထဲကို ပြန်စစ်ပါ။
အပေါ်က cmd တွေသုံးပြီး ဖျက်ချလိုက်ပါ။
ပြီးရင် ဖုန်းကို reboot ဆင်းလိုက်ပါ။
ပြန်တက်လာရင် ဖုန်းရဲ့ application manager ထဲသွားပြီး running မှာ com.android.ads…… စသဖြင့် အလယ်မှာ ad ပါတာတွေရယ်။ monkey test ရယ် time service ရယ်။ အဲဒီ apk တွေကို uninstall လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
100% အောင်မြင်မယ် အာမမခံရဲပါဘူး။ ကျွန်တော် ရှင်းပေးတဲ့ အလုံးကိုတော့ ၁ပတ်ထိ စောင့်ကြည့်တာ ထပ်မံတက်လာခြင်း မရှိတော့ပါဘူး။
အမှားအယွင်းများ ပါခဲ့ရင် ခွင့်လွတ်ပါ။
(*** ပြောဖို့ တစ်ခုကျန်သွားလို့ edit လုပ်လိုက်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကောင်တွေမှာ /data/app ထဲမှာလည်း ဘာညာ သလကာတွေ ရှိပါကြောင်း။ ဖျက်ဖို့ သဘောတရားကတော့ တူတူပါပဲ ***)
by : Soe Han Htun (Myanmar Mobile User Group)
Money Test & Time service error ကို apk နဲ့ ဖြေရှင်းချင်သူများ အတွက်
Money Test & Time service error ကို ဖြည်ရှင်းဖို့ ကျတော် bat file လေးတစ်ခုတင်ပေးထားပါတယ်။
bat file ဆိုတော့ အားလုံး သိကြတဲ့ အတိုင်း Computer ရှိမှ အဆင်ပြေ ပါတယ်။ အခု Computer မလိုပဲ ဖုန်းကနေပဲ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ apk လေး တစ်ခုတွေ့လို့ ထပ်မံ မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်။ Application ရဲ့နံမည်ကတော့ CM Security Antivirus Applock လို့သိရ ပါတယ်။ လောလောဆယ် ကျတော်ကတော့ သုံးမကြည့် ရသေးပါ။ သုံးဖူးတဲ့သူတွေ ကတော့ Firmware ပြန်တင် စရာ မလိုပဲ ဒီ application လေးနဲ့ အဆင်ပြေ ပါတယ်လို့ ပြောပြပေး ထားတာကြောင့် ကျတော်တို့ Android user တွေ အတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက် ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
application လေးအား အောက်မှာ အရင် Download ရယူလိုက်ပါ။
လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေး ကတော့ လွယ်ကူ ပါတယ်။ Download ပြုလုပ်လို့ ရရှိလာတဲ့ CM Security Antivirus Applock application လေးကို
install လုပ်ပြီး apk လေးထဲ ၀င်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Scan ဖတ်ပေး လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် apk လေးထဲ ကနေ ကိုယ့်ဖုန်းမှာ ရှိတဲ့
apk တွေထဲက virus apk တွေကို ရှာပေး ပါလိမ့်မယ်။
Scan လုပ်ပေးပြီးလို့ ပြီးရင်တော့ Resolve all ကိုနှိပ်ပြီး virus apk တွေကို Delete လုပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်ဖုန်းကို restart လုပ်ပေး လိုက်ပါ။ ပြန်သုံးကြည့်လို့ အဆင်ပြေတယ် ဆိုရင်တော့ ဆက်သုံးနိုင် ပါပြီ။ အဆင် မပြေရင်တော့ Factory data reset ချပြီး ပြန်သုံး ကြည့်လိုက်ပါ။
( အဆင်လုံးဝပြေမယ်လို့တော့ အာမ မခံရဲပါ။ Huawei 610 မှာတော့ အဆင်ပြေ ဖူးပါတယ်။ )
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, September 27, 20152comments:
ကဏ္ဍ Android, Remover
USB ကို Click တစ်ချက် ထဲနဲ့ စိတ်ချစွာ ဖြုတ်နိုင်မယ့် USB Safely Remove v5.3.8.1233 + Keygen & Portable
ဒါလေး ကတော့ နောက်ဆုံး ထွက်တဲ့ USB Safely Remove လေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာနဲ့ အသုံးပြု နေတဲ့ Memory Stick, External Hard Disk, Card Readers, နဲ Phone, Mp3, Mp4 စတဲ့ အရာတွေ အားလုံး အတွက် အသုံးဝင် ပါတယ်။ Click တစ်ချက်လေး နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ Computer ကနေပြီး USB ကို စိတ်ချစွာ ဖြုတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်သုံးနေတဲ့ USB Drive ကို ဒီအတိုင်း ဆွဲနှုတ်ရင် Data ပျောက်တာ၊ ပစ္စည်း တာရှည် မခံတာ Format ချ မရတာ စသည်ဖြင့် ဆိုးကျိုး ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ Windows7မှာတော့ USB Remove ပါလာ ပေမယ့် တစ်ခါ တစ်လေ ဖြုတ် မရဘူး ပေကပ်ကပ် ဖြစ်နေ တတ် ပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲ ကတော့ Data ဆုံးရှုံးမှု မဖြစ်အောင် Remove လုပ်ပေး နိုင်ပါတယ်။ ထုံးစံ အတိုင်း Full Version အသုံးပြု နိုင်ဖို့ အတွက် Keygen ကိုပါ တင်ပေး ထားပါတယ်။
Portable အသုံးပြု ချင်သူများ အတွက်လည်း Portable လေးကိုပါ ထည့်သွင်းပေး ထားပါတယ်။ Windows XP, 7, Vista, 8/8.1 (32-64 bit) အားလုံးမှာ အသုံးပြု နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
စိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုရင် အောက်က Link မှာ ဒေါင်းယူနိုင် ပါတယ်ဗျာ။
အားလုံးဘဲ အဆင်ပြေ ကြပါစေနော်။
ကဏ္ဍ PC-Software, Portable, Remover
ရှော့ကပ် ဗိုင်းရပ်တွေကို အလွယ်တကူ ဖျက်ထုတ်ပေးမဲ့ Virus Shortcut Remover Tool V3.1
USB Stick Memory Card တွေ ထဲက Shortcut Virus တွေကို ဒီ Tool လေးက အလွယ် တကူ ဖျက်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်...
အလွယ် တကူ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ အားလုံး အတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်.... :)
▼ zippyshare ▼ OR ▼ mediafire-1▼ OR ▼ mediafire-2 ▼
ကဏ္ဍ Antivirus, Remover
ဒီ Shortcut Virus Remover ဆော့ဝဲဟာ အတော်လေး အသုံး တည့် ပါတယ်။ မိမိ Enternal HDD, UBD
Pen Drive တို့ကို Shortcut Virus ၀င်ရောက် သွားပြီဆိုရင် ၎င်းတို့မှာရှိတဲ့ ဖိုလ်ဒါ မှန်သမျှ Shortcut တွေ
ဖြစ်သွားပြီး အဲဒီ Enternal HDD, USB Pen Drive တို့မှာ ဖိုလ်ဒါတွေရှိရင်လဲ မြင်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီပြသနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ဒီဆော့ဝဲလေးကို အသုံးပြုလိုက်ရင် အဆင်ပြေမှာပါ။ Shortcut Virus Remover
V3 နဲ့ V2 (Beta) နှစ်ခု စလုံး တင်ပေး လိုက်တယ်။ ကြိုက်တာဒေါင်းပေါ့ဗျာ။
V3 ကတော့ ပိုကောင်း တာပေါ့လေ။ ဆော့ဝဲက Portable လည်းဖြစ် ပါတယ်။ ဆော့ဝဲက အသုံးပြု ရတာ
▼ Remover v3 ▼ (OR) ▼ Remover v2.1(Beta) ▼
Credit : www.sawlinux.net
ဘလော့ခရီးသည် by ဘလော့ခရီးသည်
ကဏ္ဍ Antivirus, Portable, Remover
Tired of Safely Remove Hardware?
Believe that things should be simple and intuitive? USB Safely Remove isautility for effortless and speedy disconnection of any removable devices. Not only does it save time, but it ensures that all data remains onadevice when it is unplugged. Hiding any device from stop menu. Real device names + renaming. Keyboard shortcuts for easy device stopping.
ကဏ္ဍ Portable, Remover
USB Safely Remove 5.2.4.1215 Final Full Version Free Download
USB Safely Remove 5.2.4.1215 Final | 6.05 MB
USB Safely Remove – this isawonderful tool to automate work with your devices. It allows you to assign launch programs when connecting or disconnecting devices, and hasapowerful command line in the kit. For those who mainly works with keyboard, USB Safely Remove allows devices stop or view their contents usinga“hot key”. And most importantly, unique technology allows USB Safely Remove determine exactly what prevents stop the device and easily fix the problem.
What makes USB Safely Remove compared with built- in Windows function :
Hotkeys for tripping
Safe removal with just one click
Simply place your mouse over the icon in the system tray , and will comfortable and beautiful devices stop menu ; One click on the device and it is safely removed ! Note the clear device names ; USB Safely Remove determine the true names of devices. This allows you to disable the device you need it !
“This device can not be stopped right now.”
When the device can not be stopped, USB Safely Remove shows what programs or processes blocked him. And also allows you to close these processes with one click .
Now you can manage devices directly from the menu! Simply right-click on the device and you can open Exlorer its contents, remove it from the menu, or rename it She loves the keyboard . Use your hotkey (Win + S by default) to display the stop , and then work with devices using the keyboard. Moreover, you can enable the “Stop immediatelly”, and the program will stop your device if there are no other visible devices .
You can change the device name , uploadapicture for him , or assignahotkey.
For the device can assign one of the wonderful standard icons or upload your own image (JPG, PNG, BMP, ICO and other formats are supported).
Therefore , USB Safely Remove allows you to change many aspects of his behavior, so you can adapt the program to your taste . For example , you can set the program to hide the icon from the system tray when you doasingle device.
Can not find your product?
Open the main form. Just drag the device from the section “Hidden” in the “Displayed”, to him again you can work from the stop menu.
Mired inaroutine?
Automate! USB Safely Remove hasapowerful command line that allows you to watch the device , disconnect, see who prevents them disabled. For example, you can use the command line to automatically disable the device encrypted with True Crypt.
The abundance of new icons.
We complemented our set of icons set of devices miraculous icons.
OS : Windows 2000/Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8
ကဏ္ဍ Memory, Remover, Security
USB Safely Remove 5.2.4.1215 Final Full Version
USB မှ ဝင်လာမယ့် Virus ရန်ကို ကာကွယ် နိုင်ဖို့ အတွက် USB Safely Remove ဆိုတဲ့ software လေးကို တင်ပေး
USB အသုံးပြု သူများ အတွက် တော့ ဒီ ဆော့ဝဲ လေးက တော်တော်ဘဲ အသုံးဝင် ပါလိမ့်မယ် ဘာကြောင့် ဆိုရင်တော့
USB တွေက ပါလာမဲ့ ပိုးမွှားတွေ ရန်က ကာကွယ် ပေးနိုင်လို့ ပါဘဲ ။
ဒီဆော့ဝဲ လေးကို Full ဖြစ်စေရန် အတွက်တော့ Crack ဖိုင် လေးနှင့် Keygen လေးကို ထည့်သွင်း ပေးထား ပါတယ် ။
မိမိ ကြိုက် နှစ်သက်တာကို အသုံးပြု နိုင်ပါတယ် ။ Crack ဖိုင်ကို အသုံးပြု မယ် ဆိုရင်တော့ သူ့ကို Copy ယူပြီး အင်စ
တော လုပ်ပြီး ထားတဲ့ C/Program ထဲက သူ့မူရင်း ဖိုဒါထဲမှာ Paste လုပ်ပေး လိုက်ပါ။ ၀င်းဒိုးအားလုံးမှာ အသုံးပြု နိုင်
ဒီ APK လေး ကတော့ အသုံးပြုရ လွယ်ကူပြီး မိမိဖုန်း ထဲက မလိုအပ်တဲ့ applications တွေကို uninstall
လုပ် ပေးနိုင်တဲ့ uninstall applications လေးပါပဲ။
Android : 2.2 နှင့် အထက်ကစပြီး အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။
- Now displaying whether program ran in background or foreground
Play Store Link: Unused App Remover
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, Remover
ဒါလေးကတော့ PDF ဖိုင်လ်တွေပေါ်က Watemark အမှတ် အသားတွေကို ဖျက်ပေးနိုင်တဲ့
Software လေးပါ ... တောင်းထားလို့ အားလုံးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...။
removes image watermarks from PDF easily.
the quality of output file same as input file (wihtout watermarks).
quick processing of work.
at the beginning it asks for the registration.
enter the serial key provided in the registration.
your product will be activated successfully.
here is the activation key◘
Download Setup file◘
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, February 25, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ PDF, Remover
O&O SafeErase Professional 7.0 Build 155 (x86/x64) Full
O&O SafeErase Professional 7.0 Build 155 (x86/x64) | 24.17 MB
☺- Files, folders and individual partitions
☺- Memory cards and USB data volumes
☺- Free hard disk space
☺- Entire computer, no boot medium necessary
☺- Internet and temporary program files
Download O&O SafeErase Professional 7.0 Build 155 (x86/x64) ( 24.17 MB )
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, January 26, 2014 No comments:
Size: 30,80 Mb.
Download O&O SafeErase Professional 7.0 Build 155 (x86/x64) Full
ကဏ္ဍ Remover, Security, Undelete
iDevice အသုံးပြုသူများအတွက် Wondershare SafeEraser 2.1.0.3
Wondershare SafeEraser 2.1.0.3 | 16.94 MB
ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးကတော့ iphone/ iDevice သုံးနေသူများ ပြန်လည် ရောင်းချတဲ့ အခါမှာ
ဖုန်းထဲမှာ မိမိ အသုံးပြုစဉ်က Data တွေ Information တွေကို လွယ်ကူစွာနဲ့ တစ်ခု မကျန်
ရှာဖွေ ရှင်းလင်းပေးနိုင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးပါဘဲ။
• Works with all iDevices – Jailbroken iPhone friendly and also compatible with carrier-locked iPhones.
Download Wondershare SafeEraser 2.1.0.3 ( 16.94 MB )
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, January 22, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ iDevice, iPhone, Phone Application, Remover
ဖျက်မရတဲ့ေိုင်တွေ အတွက် Take Owner ship
ဒီနည်းလေးက သိတဲ့ သူများရှိရင် ကျော်သွားပေး ပါခင်ဗျာ မသိသေးတဲ့ သူတွေ အတွက်ပါ တချို့
ဖိုင်တွေကို ဖျက်လိုက်ရင် အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ဖျက်လို့ မရတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်
permission တောင်းတာတွေ ownership တောင်းတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ် အဲလိုမျိုးတောင်းလာပြီ
ဆိုရင် ဖျက်လို့ရအောင် လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်လေးကို အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ
ပြီးရင် ရလာတဲ့ zip ဖိုင် ကို ဖြည်ပြီး install လုပ်ပေးပါ ပြီးရင် ကိုယ် ဖျက်ချင်တဲ့ ဖိုင်ပေါ်ကို Right
click ထောက်ပြီး Take Ownership ဆိုတာလေးကို click လိုက်ပါ
ပြီးရင် delete လုပ်လိုက်ရင် ပျက်သွားပါပြီခင်ဗျာ။
by Aung Kyaw Pathein
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, January 16, 2014 No comments:
AppRemover 3.1.10.1 | 11.45 MB
AppRemover fully supports the thorough uninstallation of hundreds of antivirus and antispyware applications. The following support chart is updated with each new release. The chart lists two different types of supported applications. One set has been verified by OPSWAT Labs testing. The other set lists applications that have been reported as supported by the hundreds of thousands of users that have previously downloaded AppRemover. After using AppRemover, please takeamoment to answerafew brief questions about the product. Your feedback will greatly improve AppRemover’s effectiveness.
Download link : AppRemover
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, January 15, 2014 No comments:
အင်တာနက် Browser တွေမှာ ဘယ်လိုမှ ဖြုတ်/ ထုတ် မရတဲ့ "Adware Search & Toolbar"
ပြသနာကတော့ Free Software တွေ ဒေါင်းယူ Install လုပ်ရင်း အလိုလျှောက် ကွန်ပျူတာထဲ
ကို ရောက်သွားတာပါ.. တခြား Adware and hijacker Search & Toolbar တွေဖြစ်တဲ့ ..
IncrediBar / IncrediMail
Web Assistant စ,တာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်..
ဒီလို မလိုအပ်တဲ့ Toolbar တွေကြောင့် Browser တွေမှာ လေးလံ နှေးကွေးစေခြင်း ၊ Search
bar တွေ New Tab တွေ Home Page တွေမှာ Google ကို အရင်လို ထားမရတော့ခြင်း စတဲ့
နောက်ပြီး ဒီ Adware Toolbar တွေက စက်ထဲ Install လုပ်မိရင်လည်း ဘယ်လို ထုတ်ထုတ်
တော်ရုံထုတ်မရတတ်ပါဘူး... ခုမှ စပြီး အင်တာနက် ကွန်ပျူတာကို လေ့လာစ လူတွေ အမြဲကြုံ
ဒီနေ့တော့ ညီလေး တစ်ယောက်ရဲ့စက်မှာ "Snap.do search" & "Snap.do toolbar" ကို
လက်တွေ့ ထုတ်ပေးရင်း အတွေ့အကြုံ ဖြေရှင်းနည်းလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...။
ဖြေရှင်းနည်းကတော့ တော်တော် လွယ်ပါတယ် .. မသိသေးခင်, ရှာမရသေးခင်သာ ခတ်တာပါ... :D
1. ပထမဆုံး ဒီအောက်က Software လေးကို ဒေါင်းယူပြီး Run လိုက်ပါ..။ (Support Windows XP/Vista/7/8 )
Download and Run JRT JRT – Junkware Removal Tool.
2. အောက်ပုံအတိုင်းတတ်လာရင် ကီးဘုတ်ပေါ်က Key တစ်ခုခုကို နှိပ်ပေးပါ..။
( Press any key to start scanning your computer)
3. စောင့်နေလိုက်ပါ သူ့ဘာသာသူ System မှာ Scans and Cleans လုပ်နေပါလိမ့်မယ် ။
(Be patient until JRT scans and cleans your system)
4. အောက်ကလို Notepad ဖိုင်လ်လေးတတ်လာရင် ပိတ်ပြီး စက်ကို Restart ချပေးလိုက်ပါ..။
(Close JRT log file and and then reboot your computer.)
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, December 14, 2013 No comments:
ကဏ္ဍ Browser, Remover, Tools, နည်းပညာ, လမ်းညွှန်
usb တွေ အတွက် USB Safely Remove
usb တွေအတွက် USB Safely Remove ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေး ဆောင်ထားချင် သူများ အတွက်ပါ။
ဒီကောင်လေးက usb တွေကိုမိမိတို့ ကွန်ပျူတာမှ ပြန်လည် ဖယ်ရှားတဲ့ နေရာမှာ လုံခြုံ စိတ်ချရအောင် စွမ်း
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ ( 6MB ) ပါ အသုံးလို သူများ အနေနဲ့ အောက်မှာယူလိုက်ပါ။ Fullversion ရဖို့ အတွက်
လုပ်ပုံ လုပ်နည်းလေးကို software ထဲမှာထည့် ပေးထားပါတယ် ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်လိုက်ပါ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, October 26, 2013 No comments:
Wondershare PDF Password Remover 1.5.2.1 | 11.52 MB
- Support importing Adobe PDF 1.0 – 1.7 formats (.pdf)
- Standalone, doesn’t need Adobe Reader or Acrobat to be installed
- Support PDF files in 10 languages: English, Turkish, Thai, Latin, Korean,
Greek, Cyrillic, Arabic, Japanese, Chinese
ကဏ္ဍ Password, PDF, Remover
ဖျက်ဖို့ခက်တဲ့ဖိုင်တွေအတွက် အစွမ်းထက် Eraser
တစ်ခါတစ်ခါ .. ကျွန်တော်တို့ဟာ ဗိုင်းရပ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် သာမာန်အတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့
သုံးနေတဲ့ ကွန်ပျူတာမှာDelete လုပ်လို့မရတဲ့ ဖိုင်တွေကို ကြုံရလေ့ရှိပါတယ် ..
ဘယ်လိုပဲ Delete လုပ်လုပ် ပျက်မသွားတာမျိုး Delete လုပ်ပေမယ့် ၀င်းဒိုးက လက်မခံပဲ Error တက်လာတာမျိုးအဲဒီလို အစွမ်းထက်တဲ့ ဖိုင်တွေကို ကျွန်ပျူတာသုံးသူတော်တော်များများကြုံဖူးကြ
အဲဒီအခါ .. စိတ်ထဲမှာ နေမချိထိုင်မချိနဲ့ တော်တော်ခံရခက်ပါတယ် ..
ကိုယ့်ကွန်ပျူတာမှာလည်း လာနေသေးတယ် .. ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်လည်း ဖျက်ချင်တာ ဖျက်လို့မရဘူး
ကဲ .. အဲဒီလိုဖိုင်မျိုးတွေရှိလာရင် .. အောက်မှာ ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ Eraser ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲလေး
အားလုံးကို ဖျက်နိုင်တယ်လို့ အတင်စားချင်ပေမယ့် .. ဖိုင်တွေကို ဖျက်ပေးတဲ့ တခြားဆော့ဝဲ ကြိုက်
တဲ့ဆော့ဝဲနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် ဒီ Eraser ဆော့ဝဲလေးက ပိုပြီး အစွမ်းထက်ထက်နဲ့ ဖျက်နိုင်တာကို တွေ့
ဒေါင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ သာမန်အတိုင်းပဲ Install လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ ..
Install လုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ ဖျက်ချင်တဲ့ဖိုင်ပေါ်မှာ Right Click နှိပ်လိုက်ရင် Eraser ဆိုတာလေး
Contex Menu ထဲမှာ ပေါ်နေပါလိမ့်မယ် ..
ချက်ချင်းဖျက်ဖို့နဲ့ Restart ကျပြီးမှ ဖျက်ဖို့ နှစ်မျိုးလုပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ် ..
တော်တော်ဖျက်ရခက်တဲ့ဖိုင်တွေကို Restart ချပြီးမှ ဖျက်တာကို ရွေးပေးပြီး ကြိုးစားကြည့်နိုင်ပါ
တယ် ..ကဲ .. အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ ..
မျှဝေသူ Unknown မှာ Tuesday, March 26, 2013
ကဏ္ဍ Remover, Undelete, Uninstaller
ဒီနေ့တော့ ကွန်ပြူတာသုံးသူတိုင်းလည်း သိထားပြီးသားဖြစ်အားလုံးအတွက်လည်း အသုံးဝင် နောက်
ဆုံးဗားရှင်းလည်းဖြစ်Full Version လည်း သုံးလို့ရမယ့် ဆော့ဝဲတစ်ခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
USB Safely Remove ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ ..
ကွန်ပြူတာတွေမှာ USB လို Flash Drive တွေ တပ်ဆင်အသုံးပြုပြီးတဲ့အခါအလွယ်တကူနဲ့ အလျှင်အ
မြန် ပြန်ဖြုတ်နိုင်အောင် ကူညီပေးတဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ ..
USB ဖြုတ်တာများကွာ ဘာခက်လို့လဲ .. ဆွဲဖြုတ်လိုက်လည်း ရတာပေါ့လို့ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်
ယောက်က ကျွန်တော့်ကို စကားနာထိုးဖူးပါတယ် ..
မှန်ပါတယ် .. ဆွဲဖြုတ်လိုက်လည်း ပြုတ်တာတော့ မှန်ပါတယ် ..
အဲ .. နောက်ပိုင်းမှာတော့ USB နဲ့ ဆိုင်တဲ့ Write Protected တို့ အထဲကဖိုင်တွေShortcut Icon
တွေ ဖြစ်သွားတာတို့ Unknown Device ပြဿနာတို့ အဲဒီလိုတွေဖြစ်သွားတတ်တာ USB ကို Safely
ဖြစ်အောင် မဖြုတ်ခဲ့တာတွေ များလာလို့ပါ ..
Windows မှာ Default ပါတဲ့အတိုင်း ဖြုတ်ရင်လည်းရပေမယ့် တစ်ခါတစ်ခါမှာအဆင်မပြေတတ်ပါဘူး
ဒါကြောင့် ဒီဆော့ဝဲလေးကို သုံးကြလေ့ရှိတာပါ ..
ကဲလိုချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ
ဒေါင်းပြီးရင်တော့ ပုံမှန်အတိုင်းပဲ .. Setup ဖိုင်ကို Install လုပ်လိုက်ပါ ..
ပြီးရင် Keygen ဆိုတဲ့ ဖိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ msimg32.dl ဆိုတဲ့ဖိုင်ကို ကော်ပီကူးယူပြီး C >>
Program files >> USB Safely Remove ဆိုပြီး ဖိုလ်ဒါအဆင့်ဆင့်ဖွင့်ဝင်သွားပြီး Paste
ပြီးရင်တော့ Keygen ဖိုင်ကို Run လိုက်ပြီး Generate ကို နှိပ်လိုက်ရင်ထွက်လာတဲ့ Username နဲ့ Key
ပြီးရင် ဆော့ဝဲကို Run လိုက်ပြီး Register လုပ်တဲ့နေရာမှာ ထည့်ပေးလိုက်ပါ
ဒါဆိုရင် Full Version အဖြစ် အသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီ
USB Safely Remove 5.2.1.1195 Final Incl Keygen
မျှဝေသူ Unknown မှာ Saturday, March 16, 2013 No comments: